world history Archives - Page 24 of 33 - Thutazone
ဖွေဖွေရှာရှာ ဂရိဒဏ္ဍာရီလာ ဗီးနပ်စ် အချစ်နတ်သမီးအကြောင်း
ရေးသားသူ - Ko Kyel Sin (ဗဟုသုတ ကြယ်စင် ဂရု) အနောက်တိုင်း၏ မိုးနတ်ဒေဝီ အလှဧကရီ နတ်သမီးမှာ အက်ဖရိုဒိုက် (Aphrodite) ဖြစ်ပေသည်။ သူ့ကို ရောမတို့ ခေါ်သော ဗီးနပ်စ် (Venus) ...
ကမ္ဘာ့အဆိုးရွားဆုံး နျူကလီးယားပေါက်ကွဲမှု နှင့် နျူကလီးယားတစ္ဆေမြို့
Via : Academy “ ချာနိုဘိုင်း” နျူကလီးယား လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံသည် ယခင်ကဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဝင် ယူကရိန်း နိုင်ငံတွင်တည်ရှိခဲ့သည် ။ ထိုစက်ရုံတွင် ၁၉၈၆ ဧပြီလ ၂၆-ရက် နံနက်အချိန်က ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် အဆိုးရွားဆုံး နျူကလီးယား မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည် ...
Via : Academy ကမ္ဘာ့ဘဏ်(World Bank) သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်ဖြစ်သည် ။ ၁၉၄၄ ဇူလိုင်လ တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု New Hampshire ဒေသ၌ ကျင်းပခဲ့သော ...
ရုရှား-ဂျပန်စစ်ပွဲ (World War Zero) အကြောင်း
ရေးသားသူ – Ko Kyaw Min Hein(ဆြာကြက်) သမိုင်းအကျဉ်း ၁၉၀၄-၁၉၀၅မှာ ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်ဘက်ကို နယ်မြေချဲ့ဖို့လုပ်လာတဲ့ ရုရှားအင်ပါယာနဲ့ မေဂျီခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးပြီးကာစဂျပန်အင်ပါယာ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပါတယ်။ ရုရှားအင်ပါယာမှာ အဲသည့်အချိန်က အရှေ့ဖျားရေတပ်စခန်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲသည့်နှစ်ခုမှာ ဗလာဒီဗော့စတော့ဆိပ်ကမ်းက နွေရာသီလောက်ပဲ သုံးလို့ရပာတယ်။ ...
ဂရိတွေက ဟီရာ့ခလီယန်(Heracleion) လို့ခေါ်တဲ့မြို့ကို အီဂျစ်တွေကတော့ သွန်နစ်(Thonis) လို့ခေါ်ပါတယ်။ တခါတရံမှာတော့ နှစ်မျိုးစလုံးကိုပေါင်းပြီး Thonis-Heracleion လို့ခေါ်တတ်ပါတယ်။ ဟာရာကလီယွန်ဟာ နိုင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာ ရှိခဲ့တဲ့ အီဂျစ်နိုင်ငံက ရှေးဟောင်းဆိပ်ကမ်းမြို့ကြီး တစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမြို့ဟာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၇၀၀ခန့် ...
ရေးသားသူ - Moshe Dayan - K ငြိမ်းချမ်း(Irrawaddy Buremse) ၁၉၅၇ ခုနှစ် ဆောင်းဦးရာသီ ကုန်ခါနီးကာလ အီဆာဟာရယ်သည် စာတမ်းတစ်စောင်ကို တစ်ညလုံး ထိုင်ဖတ်နေသည်။ အလွန်ထူထဲလှသော စာတမ်းကြီးသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးစကပင် ...
Page 24 of 33 Prev 1 … 23 24 25 … 33 Next